Vidio 5 - Nsogbu Ọgụgụ Isi | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 5 - Nsogbu Ọgụgụ Isi.
Ejikọtara Ọrịa Uche / Site mere
5 vidiyo - Dysphoria nke Nwata.
Nsogbu Ndị Uche Achịkọtara.
Nnọọ. Abụ m John Whitehall, onye dibịa bekee, nke a bụ okwu ọzọ n'okwu gbasara Childhood Gender Dysphoria. Anyị elebawo anya na ọrịa ahụ ma chọpụta na nke ahụ na-emesi obi ike. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụmụaka ga-agabiga nsogbu a site n'oge uto. Anyị eleba anya na ntinye okwu banyere ihe ọgwụgwọ ahụ bụ. Nke a jọgburu onwe ya n'ihi na ọ bụ nnukwu mbubata n'uche na ahụ ụmụaka na-enweghị usoro mmụta sayensị na-akwadoghị. Anyị ekwuola, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ m, mana anyị zoro aka na isiokwu ndị ọzọ, na enwere ụkọ, enweghị oke, enweghị ihe akaebe ọ bụla na itinye aka nwere ike ime ka nwatakịrị ahụ ka mma. Anyị kwubiri, n’ezie, nke ahụ pụtara na nke a bụ nnwale.
Ugbu a ajụjụ bụ, olee ụmụaka ndị anyị ga-etinye aka na ya n'ụzọ dị otu a? Kedu ka ụmụaka ndị a dị? Onwere onye maara? Ee, ee, ndị mmadụ maara. Ndị mmadụ emeela ihe ọmụmụ na ya. Ihe m na-akọ ugbu a bụ ụfọdụ njirimara ụmụaka a.
Ugbu a, achọghị m ileda ụdị nhụjuanya ụmụaka na-ata anya. Achọghị m ilelị ahụhụ ndị mụrụ na-ata. Anaghị m eleda ihu ọma nke ndị dọkịta metụtara. Ihe anyị na-eme bụ ịsị, Ọfọn, kedụ ka ụmụaka ndị a na-ekwuwapụta ọgbaghara ma ọ bụ na-ekpughe ọgbaghara na njirimara nwoke ha?
N'oge na-adịbeghị anya, nke ahụ bụ ikwu na ọkara 2018, na otu n'ime akwụkwọ akụkọ bụ isi nke nlekọta paediatrics n'ụwa, Paediatrics, nke ụlọ akwụkwọ American Paediatrics wepụtara, enwere nyocha banyere nsogbu ụbụrụ, nkwarụ metụtara ụbụrụ metụtara, na 1333 transgender na ụmụ na - adịghị agbanwe agbanwe ụmụ, nke onye nlekọta na - elekọta ebe ahụ chọpụtara, Kaiser Permanente, na ngalaba nke ha na - emekọ ihe gbasara California na ụfọdụ steeti ndị dị nso. Ya mere, obughi oru m. Nke a bụ ọrụ bụ Per Permanente. Ha nwere umuaka 1333 bu oria banyere nwoke na nwanyi nke okike. Ha nwere nyocha ọ bụla ọzọ? Ha lere ụmụaka anya site na afọ atọ ruo itoolu, ma mesịa mesịa ruo afọ iri na asaa.
Anyị ga-ebu ụzọ lebara ụmụntakịrị anya. Enwere umuaka 251 na afo ahu site na ato rue ato. Enyerela pasent 31.7 n'ime ha nyocha nke nsogbu ọgụgụ isi yana Gender Dysphoria. Ọrịa ntị mpe, 15 percent. Nchegbu, pasent 14. Omume na ọgba aghara, 2.7 percent. Pasent 5 nke ụmụ nwanyị ndị trans bụ ndị nwere nsogbu, na pasent 11 nke ndị trans trans na-enwekwa ịda mbà n'obi. Pasent 5 ahụ bụ obere ọgụgụ. N’ụwa nile, ndị ọzọ achọpụtala na ihe dabara adaba nke ihe ruru pesenti 20 n’ime ụmụaka ndị a bụ ndị nwere nsogbu onwe ha. Yabụ, nke ahụ bụ nnukwu ọnụ ọgụgụ sitere na obere ụmụaka.
Gịnị banyere ụmụ ndị ka ibu? Ndị sitere na 10 ruo 17 afọ, 73 pasent, nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu, ụzọ atọ, anatala nyocha ahụike, nyocha ahụike metụtara ọrịa uche. Nchegbu, pasent 38. Ntị mpe, 19.6 percent. Nsogbu ịda mba, pasent 56. Ọrịa, 4.7 percent. Na schizophrenia ụdịdị dị iche iche, 1.6 percent. N'ime ụmụaka ndị a, pasent 14.5 emetụtala ọrịa siri ike nke na emeela ka ha gaa ụlọ ọgwụ.
Ugbu a, ịbụ onye pediatrician maka ihe dịka afọ iri ise, echetaghị m na m na nwatakịrị na-echegbu onwe ya, a ga-etinye ya na ụlọ ọgwụ. Mana n'ime ndị a, pasent 45, nke kwesịrị ichegbu onwe gị na ị na-ahọrọ, ị nọ na ya, otu ụmụaka nwere ike ịkpa oke. Pasent 75 nke ha nwere ọrịa metụtara. Ndị a bụ ụmụaka nsogbu.
Ndị na-akwado maka usoro ọgwụgwọ na-ekwu, "Ọfọn, ee, ha na-enwe nsogbu, ọ dị mma. Ha nwere nsogbu n'ihi na ọha mmadụ anaghị anabata Gender Dysphoria ha. Ya mere, a na-ekwutọ ha ma na-asọpụrụ ha ma na-amaja ha n'ụlọ akwụkwọ. Ya mere, anyị kwesịrị ịnwe mmemme pụrụ iche nke na-emegide mmekpa ahụ n'ụlọ akwụkwọ ma na-akọwa ihe transgender bụ n'ụlọ akwụkwọ n'ihi na ọ bụghị na ụmụaka ndị a dara ogbenye na-arịa ọrịa uche, ọtụtụ n'ime ha na ọ bụ ndị mmadụ na-ebute ya. "
Ọfọn, enwere akụkọ na n'ezie na-ekwu na ndị nyocha a bịara nke mbụ na Gender Dysphoria bịara nke abụọ? Ee, ọtụtụ n'ime ha. Ana m ekwu banyere otu. Nyochaa ihe ngosi na ụlọ ọgwụ Finnish, site na 2011 ruo 2013, kwupụtara pasent 75 nke ụmụaka ndị a ma ọ bụ na-agagharị ugbu a na ọgwụgwọ ụmụaka na-eto eto, maka ebumnuche ndị ọzọ karịa Gender Dysphoria, mgbe ha chọrọ ntugharị.
N'ime ndị ahụ, pasent 68 nwere kọntaktị mbụ ha na ọrụ psychi n'ihi ihe ndị ọzọ na-abụghị Gender Dysphoria. Na omumu ihe omumu nke Finnish. Obi nkoropụ, pasent 64. Nchekasị, pasent 55. Onwe-emerụ onwe ya, ihe mgbaàmà uche mmụọ, ọgba aghara aghara, nsogbu ọgba aghara akpaghị aka, pasent 26.
Ọ bụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụmụaka nwere nsogbu uche nke autism na enweghị ike ya. Ọ bụ nsogbu uche nke nwere ihe mgbochi na njedebe, nkọwa nke ihe ziri ezi na ihe na-ezighị ezi, ihe dị adị na ihe na-abụghị eziokwu. Imirikiti ụmụaka ndị a mgbe ahụ, otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, na-esozi na-enwe mgbagwoju anya gbasara ụdị nwoke ha bụ. Nke ahụ bụ ihe mwute n’ezie ma kwesiri ịgwọ ya n’obi ọmịiko, nlekọta, enyemaka. Ọ bụchaghị ido onwe gị n'okpuru ọgwụgwọ hormonal na transgendering arụmọrụ.
Enwere usoro ọgwụgwọ maka ọrịa ahụike ndị a na ụmụaka. Ihe atụ, ọmịiko, ịnọdụ ala ma na-arụ ọrụ, nke ọma, gịnị na-agahie na ezinụlọ? Ebee ka nrụgide a nile si abịa? Kedụ ka ọgba aghara Dysphoria si bịa? Enwere ọgwụ ndị anyị kwesịrị iji? Enwere ndụmọdụ nke anyị kwesịrị iji? Nke a bụ otu ụzọ anyị si emeso ụmụaka nwere isi mgbaka. Anyị anaghị adị ngwa itinye aka na ọgwụgwọ hormonal ma ọ bụ ịwa ahụ.
Enwere akwụkwọ na-adịbeghị anya nke na-arụrịta ụka n'ihi na ụfọdụ ndị anaghị enwe mmasị n'ihe ọ na-ekwu. Ha enyochale ọhụụ ọhụrụ a bụ Rapid Onset Gender Dysphoria. Agbanyeghị na emesobeghị m nwatakịrị ọ bụla nwere Gender Dysphoria, kemgbe amalitere m ide banyere nke a afọ abụọ gara aga, ọtụtụ ndị nne na nna agwala m okwu. Ọbụna site na Ireland, ọbụlagodi Canada, na ọ ga - abụrịrị steeti niile. Ọtụtụ n’ime ha na-echegbu onwe ha gbasara nwa ha. N'ezie, ha ga-abụ. Imirikiti ụmụ agbọghọ ahụ nọ na mmalite afọ etolite bụ ndị kwupụtara na mberede na ha bụ Gender Dysphoric.
Nke a nwere njirimara niile, na-apụta n'ụyọkọ ndị enyi, njirimara niile nke nsogbu omume ndị ọzọ dịka anorexia nervosa, nke anyị maara nwere ike ịbịakọta n'otu ụyọkọ. Nsogbu iri nri bụ ụdị nsogbu ụdị oyiri. Nke ahụ adịghị eweda nsogbu a. Mana ọ na-ewelite echiche a banyere okwu gbasara mmụọ na-efe efe.
O di nma, ya mere ha nyochachara n’ime akwụkwọ a nke ụmụ nwanyị 251 nwere afọ nke 16 afọ. Nke a pụta na nso nso a. Nchoputa nke 62.5 choputara ma obu opekempe ahuike uche ma obu nkwario-eto eto. Nkwarụ ọgbụgba! Ha na-ekwu na nke a bụ ihe kpatara nsogbu akpịrị autism, psychosis, nsogbu ịkpa agwa na ihe ndị ọzọ.
Yabụ, okwu a bụ na anyị na ndị otu na-enweghị nsogbu na-akpakọrịta. Otu ìgwè ụmụaka na-ata ahụhụ kwesịrị ka anyị nwee ọmịiko. Ma na ha pụtakwara na nsogbu a gbakwunyere na ha nwere mgbagwoju anya gbasara nwoke na nwanyị. Ha nọ na-enwe mgbagwoju anya banyere ihe niile dị na ndụ. Ndụ dị nnọọ njọ, enwere m nkụda mmụọ. Ma ọ bụ ndụ dị egwu, ana m echegbu onwe m. Ya mere na. Ha niile nwere psychosis ha efunahụla eziokwu. N'ime ọgba aghara ahụ niile, ha gbagote, “Eleghị m abụ nwata nwoke. Ma eleghị anya, abụ m nwa agbọghọ. ” Anyị eguzobewo ụzọ isi mesoo nke a. Anyị anaghị eleda ahụhụ ha metụtara anya.
Yabụ, enwere otu ụmụaka nwere nnukwu nsogbu. Gịnị banyere ndị nne na nna ahụ? Kenneth Zucker, onye duru ngalaba ahụ na Toronto ruo ọtụtụ afọ, mgbe ọ lere anya na nke a, ọ sịrị, “Achọpụtara m na ihe ruru pesenti 50 nke ndị nne na-enwe nsogbu njirimara nwoke na nwanyị, nke a bụ aha ochie ya, ụmụ nwoke nwere 2 ma ọ bụ karịa nyocha nyocha nyocha nyocha na ihe dịka 25 pasent nwere atọ ma ọ bụ karịa nyocha. Ọnụọgụ nke usoro ọmụmụ nwa na mmekọrịta nne na nna bụ usoro mmekọrịta siri ike nke usoro ọgwụgwọ ọrịa ụmụaka. ” Nke ahụ bụ ntakịrị nke mmụọ gobbledygook. Nke a siri ike nghọta. Gịnị ka ọ na-ekwu n'ezie? Ọ na-ekwu na n'ọnụ ọgụgụ dị oke mkpa nke nne, ha na-egosi ihe akaebe nke adịghị ike mmụọ n'onwe ha. Nke a bụ ihe nwute, ma anyị anaghị akatọ ndị nne. Anyị abụghị, ọ bụghị ma ọlị. Anyị anaghị ekwu na ọ na-eme ụma eme ihe a. Mana ihe anyị na-ele anya ebe a bụ na ọ bụrụ na enwere mmetụta nne na nna na nke a, ma duga Gender Dysphoria na nwa ahụ, anyị kwesịrị ile anya na nyocha na inyere ndị nne na nna aka, ọ bụghị ịgwọ nwa ahụ na homonụ. Nke ahụ bụ nnukwu okwu. Anyị kwesịrị ịdị na-ele anya gabiga. Anyị hụrụ na nwatakịrị ahụ nwere nsogbu, anyị kwesịrị ịdị na-ele anya gabiga ihe nsogbu enwere na ezinụlọ ma na-emeso ha n'ụzọ dị iche.
Ọ gara n’ihu ikwu na 53 pasent nke ndị nne ụmụ nwoke dysphoric zutere nchoputa nke ọrịa ma ọ bụ ịda mbà n’obi ókè, ma e jiri ya tụnyere pasent 6 nke ndị ọzọ.
Onye ọrụ ọzọ kwuru, sị, “Ndị nne nke ụmụaka a na-egbu egbu nwere àgwà na omume ndị na-akwalite symbiosis na nkụda mmụọ ịchị onwe ya.” Yabụ, n'ụzọ ọzọ nwatakịrị ahụ na-arapara nne ya.
Ebee ka ihe a niile na-eduga? Nke a na - ebute okwu na anyị nwere otu ụmụaka, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na - ata ahụhụ, nwere ike na - ata ahụhụ, ya bụ ị nwere ike ịsị na ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, achọghị m itinye ọnụ ọgụgụ na ebe a, mana anyị nwere otutu ndi nwere umuaka n’enweghi nsogbu n’etiti otutu ndi nne na nna adighi ike.
Mgbe anyị lere anya, ndị nne na nna a lụrụ nwanyị? Ndi enem ndọ? Mgbe m lere anya na akụkọ sitere na Courtlọikpe Ezinaụlọ nke Australia, ọtụtụ ụmụaka si n'ezinụlọ ndị gbawara agbawa. Yabụ, enwere nnukwu ihe na - emetụta ọrịa uche. Nke ahụ pụtakwara na anyị kwesịrị ịdị nso na nke a n'ụzọ mmetụta uche, ghara iwebata ụmụaka n'ụzọ nke ahụike nke ịba uru na ịwa ahụ.
Vidio 5 –Associated Disorder Mental - Pịa> Iji budata PDF ebe a.